Bulawayo – Zimbabwe Online News
Home » Posts tagged "Bulawayo"
Zanu PF factional battles intensify in Byo
Cracks are widening in Zanu PF’s deeply divided Bulawayo province with new clashes among party bigwigs in the province.
The post Zanu PF factional battles intensify in Byo appeared first on The Zimbabwe Independent.
June 7, 2013 Web Desk National, News No Comment
GOVERNMENT will this year disburse US$5 million under the Dimaf as part of efforts to recapitalise ailing companies in Bulawayo. The post Govt in effort to bail out ailing companies appeared first on The Zimbabwe Independent.
The post Bulawayo meat, vegetables contaminated with bacteria appeared first on The Zimbabwe Independent.